Sharciga Ohm: Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Waxaa Loogu Fasiray Qaab Sahlan | Qalabka bilaashka ah
Sharciga Ohm: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Haddii aad ka bilaabeyso adduunka korantada iyo korantada, hubaal waxaad maqashay kuwa caanka ah kun jeer Sharciga Ohm. Mana ahan wax kayar, maxaa yeelay waa sharci aasaasi ah oo ku saabsan aaggan. Ma ahan wax isku murugsan gabi ahaanba, waxaana badanaa la barto bilowga sababta oo ah sida ay muhiimka u tahay, iyadoo taasi ay jirto, hadana waxaa jira qaar bilow ah oo aan aqoon.
Tilmaamahan waxaad ku baro wax kasta oo aad u baahan tahay ku saabsan Sharcigan Ohm, laga bilaabo waxa uu yahay, qaaciidooyinka kala duwan ee ay tahay inaad barato, sida loogu adeegsan karo Codsiyada wax ku oolka ah, iwm Iyo si aan xitaa wax uga fududeeyo, waxaan sameyn doonaa isbarbardhig badan oo caqli gal ah oo u dhexeeya nidaamka korantada iyo biyaha ama nidaamka haydarka ...
1 Isbarbardhigga nidaamka haydarka
2 Waa maxay Sharciga Ohm?
2.1 Codsiyada Sharciga Ohm
Isbarbardhigga nidaamka haydarka
Kahor intaanan bilaabin waxaan jeclaan lahaa inaad fikrad cad ka haysato sida nidaamka korontadu u shaqeeyo. Waxay u muuqan kartaa mid dhib badan oo ka mugdi badan nidaamyada kale, sida mid haydiga ah oo aad leedahay dareere maraya tuubooyin kala duwan. Laakiin maxaa dhacaya haddii aad sameysay a jimicsi male oo aad qiyaasi kartaa in elektarooniga korontada ay biyo yihiin? Waxaa laga yaabaa inay kaa caawin lahayd inaad si dhakhso leh oo aasaasi ah u fahamto sida ay wax run ahaantii u shaqeeyaan.
Tan waxaan u samaynayaa isbarbardhig mid koronto iyo hal haydaroolli. Haddii aad bilowdo inaad ku sawirto qaabkan waxay noqon doontaa mid dareen badan leh:
kaari: qiyaasi waa tuubo biyo ama tuubbo.
Daaweynta: Waxaad ka fikiri kartaa cunsur joojiya qulqulka biyaha.
Koronto: waa wax aan ka badneyn qulqulka elektaroonigga ee maraya dariiqa, markaa waxaad u maleyn kartaa inay tahay socodka biyaha oo maraya tuubo.
Koronto. Taasi waa, waad qiyaasi kartaa danab sida cadaadiska biyaha tuubada.
Resistance: Sida magaceeda ka muuqata, waxay iska caabin ku tahay marinka korantada, taas oo ah, wax ka soo horjeeda. Qiyaas inaad farta saartay dhamaadka tuubada waraabka ee beertaada ... taasi waxay ku adkeyneysaa diyaaradda inay soo baxdo oo ay kordhiso cadaadiska biyaha (danab).
Adag: xaddiga ama dhererka socda ee ku mara mashiinka korantada wuxuu la mid noqon karaa xaddiga biyaha ee tubbada maraya. Tusaale ahaan, ka fikir in hal tuubbo ay tahay 1 ″ (xoojin hoose) iyo 2 ″ tuubbo (xoojin sare) ayaa lagu buuxiyaa dareerahan.
Tani waxay sidoo kale kuu horseedi kartaa inaad u maleyso inaad isbarbar dhigi karto qaybaha korontada oo leh hydraulics:
Unug, baytari, ama koronto: waxay noqon kartaa sida isha biyaha.
Kondensarka: waxaa loo fahmi karaa inay tahay kayd biyood.
Transistor, gudbinta, wareeji ...- Qalabkan xakamaynta waxaa loo fahmi karaa qasabad aad shidi karto oo aad xidhi karto.
Resistance- Waxay noqon kartaa iska caabinta aad saarto markii aad fartaada ku cadaadiso dhamaadka tuubbada biyaha, qaar ka mid ah xukumayaasha jardiinooyinka / biiyaha, iwm.
Dabcan, waxaad sidoo kale ka fikiri kartaa waxa lagu sheegay qaybtaan si aad u hesho gabagabo kale. Tusaale ahaan:
Haddii aad kordhiso qaybta tuubbada (xoojinta) caabbintu way yaraan doontaa (eeg Sharciga Ohm -> I = V / R).
Haddii aad kordhiso iska caabinta tuubada (caabbinta), biyuhu waxay la soo baxayaan cadaadis saa'id ah isla socodka socodka (eeg Sharciga Ohm -> V = IR).
Hadana haddii aad kordhiso qulqulka biyaha (xoojinta) ama cadaadiska (danab) oo aad diyaaradda u jeediso dhankaaga, waxay sameyn doontaa waxyeelo dheeri ah (shoog koronto oo khatar badan).
Waxaan rajeynayaa in tusaalooyinkaas aad wax fiican ka fahantay ...
Waa maxay Sharciga Ohm?
La Sharciga Ohm waa xiriir aasaasi ah oo udhaxeeya seddex tiro oo aasaasi ah oo ah xoojinta hadda, kacsanaanta ama danab, iyo iska caabin. Wax aasaasi u ah fahamka mabaadi'da hawlgalka ee wareegyada.
Waxaa loogu magac daray ka dib markii uu daahfuray, fiisikiska Jarmalka George Ohm. Wuxuu awooday inuu fiiriyo heerkulka joogtada ah, korantada korantada ee dhex socota caabbinta toosan ee tooska ah waxay si toos ah ugu dhigantaa danabyada laga isticmaalo guud ahaan iyo u dhiganta iska caabbinta. Taasi waa, I = V / R.
Saddexdaas baaxadood ee qaaciddada waa la xallin karaa si loo xisaabiyo danab ka dhan ah qiimayaasha hadda jira iyo kuwa iska caabinta ah, ama sidoo kale caabbinta oo ah shaqo danab la siiyay iyo tan hadda jirta. Magac ahaan:
Aniga oo ah awoodda hadda jirta ee wareegga lagu muujiyey amperes, V danab ama danab lagu muujiyey volts, iyo R iska caabin lagu muujiyey ohms.
by ejemploQiyaas inaad haysato laambad wax cunaysa 3A oo ka shaqaysa 20v. Si loo xisaabiyo iska caabinta waxaad codsan kartaa:
Aad ufudud, sax?
Codsiyada Sharciga Ohm
ka Codsiyada Sharciga Ohm Iyagu waa kuwo aan xad lahayn, awoodna u leh inay ku dabaqaan tiro xisaabeed iyo dhibaatooyin xisaabeed si ay u helaan qaar ka mid ah saddexda baaxad ee ay ku xiriiraan wareegyada. Xitaa markii wareegyada ay aad u adag yihiin, waa la fududeyn karaa si loo dhaqan geliyo sharcigan ...
Waa inaad ogaataa inay jiraan laba xaaladood oo gaar ah gudaha Ohm's Law marka laga hadlayo wareegga, kuwanna waa:
Wareeg gaaban: xaaladdan oo kale waa marka laba wadiiqo ama qaybo ka mid ah wareegga ay xiriir yeeshaan, sida marka ay jirto curiye xiriir ka sameynaya laba koronto yaqaan. Taasi waxay keeneysaa saameyn aad u xagjir ah oo halka hadda ay u dhigantaa danabku uu ku dhammaado gubasho ama waxyeelo qaybaha.
Wareeg furan: waa marka wareegga la gooyo, ama si ula kac ah loo isticmaalo biiro, ama sababta oo ah bareeyaha qaar ayaa la jaray. Xaaladdan oo kale, haddii wareegga laga fiirin lahaa aragtida Sharciga Ohm, waa la xaqiijin karaa inuu jiro iska caabin aan dhammaad lahayn, marka ma awoodo inay wax qabato hadda. Xaaladdan oo kale, ma aha mid burburinaysa qaybaha wareegga, laakiin ma shaqeyn doonto illaa iyo inta wareegga furan soconayo.
In kasta oo sharciga Ohm ee aasaasiga ahi aanu ku jirin baaxadda korontada, waxaa loo isticmaali karaa aasaas ahaan xisaabinta wareegyada korantada. Waana in awoodda korontadu ku xiran tahay danab iyo xoog (P = I · V), wax Sharciga Ohm laftiisu gacan ka geysan karo xisaabinta ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » waxbarashada » Sharciga Ohm: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
CAD: dhammaan wixii ku saabsan softiweerka naqshadeynta kombuyuutarka
Raspberry Pi 400: kumbuyuutar dhammaystiran oo ku yaal kumbuyuutarka